နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလ ပြည်သူလူထုရဲ့ နာကျင်ခံစားရသမျှတွေကို ရင်ဖွင့်နိုင်သလို ဝေဝေဝ… – PVTV Myanmar
နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလ ပြည်သူလူထုရဲ့ နာကျင်ခံစားရသမျှတွေကို ရင်ဖွင့်နိုင်သလို ဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေတဲ့ ဒွိဟစိတ်တွေကို တတ်နိုင်သမျှမေးမြန်းရှင်းပြပေးမှာကြောင့် နားစွင့်ထားကြသင့်ပြီး အားလုံးအတူတကွ တူညီသော ပန်းတိုင်တစ်ခုဆီ ရွက်လွှက်ကြဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ “ရင်ဖွင့် နားစွင့် ပန်းတိုင်ဆီရွက်လွှင့်ကြမယ်” ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်ကို ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒေါင်းက စီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ယခုအစီအစဉ်ကို PVTV က အပတ်စဉ် စနေနေညတိုင်း တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 36K Share – 5945
2021-06-01 at 5:18 PM
လွမ်းနေခဲ့တာ အဆင်ပြေရဲ့လား အကို ❤️
Thinzar Than Oo says:
2021-06-01 at 5:27 PM
အခုလိုလေး တွေ့ရတော့ ၀မ်းသာမိတယ် 🧡
Thandar Soe says:
Naing Naine says:
2021-06-01 at 5:36 PM
NUG ရဲ့ခြေလှမ်းတွေကို နှေးနေတယ်လို့မြင်တယ် အဓိက စစ်ရေးပိုင်းမှာပါ၊ ပြည်သူတွေက အသေခံပြီးတိုက်ပေးနေတယ် မြို့ပြတိုက်ပွဲတွေကို အသက်တွေပေးပြီး တူမီးနဲ့ ပြန်တိုက်နေကြတယ်၊ စကစ ကိုစစ်ရေးကလွဲပြီး နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့‌ဖြုတ်ချလို့မရတာ အားလုံးနီးပါး နားလည်လာကြတဲ့အချိန်မှာ NUG ဟာစစ်ရေးကိုပိုပြီး ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့မြင်တယ်၊ နိုင်ငံရေးအရ ပြည်ပနိုင်ငံတွေက NUG ကိုတရားဝင်အစိုးရလို့အသိမှတ်ပြုပေးရင်တောင် စကစ ကိုဖြုတ်မချနိုင်ရင် NUGဟာ စစ်သေနဃမဟာဗျူဟာလေ့လာရေးက သိန်းထွန်းဦး ပြောသလို စာတွေသာထုပ်နေတဲ့ အစိုးရဖြစ်လိမ့်မည်။နောက်လာမယ့် အစီစဉ်တွေမှာ NUG ရဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စစ်တိုင်းဒေသတွေနဲ့အတူ စကစ ကိုစစ်ရေးအရ NUG ရဲ့ရှေ့ခြေလှမ်းတွေကို ဆွေးနွေးပေးလို့ရရင် ဆွေးနွေးပေးစေခြင်ပါတယ်၊ကျေးဇူးပါ။
2021-06-01 at 5:38 PM
Ong ngai lian ing ei
ChuePann Sint PyoeKhin says:
2021-06-01 at 5:40 PM
2021-06-01 at 5:46 PM
2021-06-01 at 5:50 PM
Theint Theint ဒါမျိုးကျ စောစော စီးစီး တွေ့ရဲ့သားနဲ့ mention မခေါ်ဘူးနော် ခများက စိတ်ဓါတ်ဖဲ
အမြဲတမ်းလေးစားခဲ့ရတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက် ကိုမင်းကိုနိုင် နဲ့ မောင်လေးဒေါင်း တို့
ကျန်းမာကြပါစေ မကြာမကြာ ပြည်သူတွေနဲ့ ထိတွေ့ပေးပါ
Pa Kyaw says:
Daw Thu Zar says:
2021-06-01 at 6:05 PM
ပြည်တွင်းဖြစ် R2p 💪💪💪
ကိုယ်တွေ အားပေးတဲ့ မင်းသားဆိုတာ ဒါမျိုးပါ။
Moe Moe Htun says:
2021-06-01 at 6:27 PM
ဦးပေါ်ရော ကိုဒေါင်းရော ကျန်းမာကြပါစေရှင့်။
ပြည်သူနဲ့ ထိတွေ့ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။💖
Ko Myo Min says:
Min Thu Zaw says:
2021-06-01 at 6:46 PM
ကိုမင်းကိုနိုင် မျက်နှာ အမ်းနေတယ်။ နေကောင်းတဲ့ပုံ မပေါ်ဘူး။ လူကောင်းသူကောင်းတွေ တန်ဖိုးမရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာ ငါတို့ကြီးပြင်းရတယ်😔
Moe Thida Oo says:
2021-06-01 at 7:09 PM
ဒီ​နေ့ပဲ ဒေါင်းကိုသတိရနေတာ ​​ေနကောင်းစွာဖြင့် တွေ့ရတော့ ဝမ်းသာမိ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
တရားသူကြီးဆိုသူတွေ မြင်နိုင် သိနိုင် ကြားသိနိုင်ပြီး အမြင်မှန် ရစေချင်ပါသည်။
Kyaw Daywa says:
Oo Laymyint says:
2021-06-01 at 7:47 PM
တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ပန်းတိုင်တူကြမယ်ဆိုရင် ဒီတိုက်ပွဲ မအောင်မြင်စရာမရှိဘူး
Bake Gyi says:
2021-06-01 at 8:15 PM
ကိုဒေါင်းရေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကို နည်းနည်းတော့ ကြည့်ပေးပါဗျာ တကယ်ခက်ခဲတ့ဲလူတွေက အခက်အခဲကြားက ကျားကန်ထားရတာပါ
2021-06-01 at 8:48 PM
ပန်းတိုင်ဆီသို့ အတူတူ ရွက်လွှင့်ကြပါ စို့။
နာမည္ေတြကိုျကားရတာ အားနာတယ္ဗ်ာ တရားရံုးလား မတရားရံုးလားဆိုတာ ကမ႓ာကသိေနျကျပီ ေခါင္ေဆာင္မွန္ရင္ ရင္ဆိုင္ရဲတယ္ ပညာနဲ႔ပဲ စစ္အာဏာရွင္းေတြရဲ႔ အဆုးံဇာတ္လမ္းေတြက သနားစရာပါ
အရေးကြီး အရေး ပါ တဲ့ အရာတွေထဲမှာ
ဒီလို အစီအစဉ် တင်ဆက်မှုတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ် တခြားတခြား အနုပညာ ရှင်တွေ ရှိသေးတာကို စဥ်ဆက်မပြတ် ထုတ်လွှင့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါရစေ ခင်ဗျာ
Khinthet Maw says:
ပြည်တွင်းဖြစ် R2P 💪💪💪💪💪
2021-06-01 at 10:50 PM
ခုလို အစီအစဉ်လေး အမြဲမျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင့်
2021-06-01 at 11:11 PM
ချစ်တယ် လေးစားတယ် ချမ်းတို့အတွက် အားဆေးပါဘဲ ပြည်သူတွေအတွက် တကယ်အလုပ်လုပ်ပေးလို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘေးကင်ပြီး ပြည်သူအကျိုး အဆုံးတိုင်းသယ်ပိုးနိုင်ပါစေ
Sein Shwe Mya says:
2021-06-02 at 7:03 AM
Take care”my idol”
Daw Zin Mar Win says:
2021-06-02 at 7:10 AM
Aung Moeswe says:
2021-06-02 at 8:00 AM
မကြာမီ ဆိုတဲ့ အချိန်ကို
အနီးစပ်ဆုံး အချိန်နဲ့ သိချင်ပါတယ်
( တပတ် တလ. နှစ်လ)
ကိုဒေါင်းရဲ့ ဝိုင်းစက်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေကို သဘောကျလိုက်တာ😁
ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့pageမှာကျ အပြောင်တွေ မမန့်ရဲလို့😁PVTVမှာ လာပြောရတာ
2021-06-02 at 9:39 AM
ဖမ္းစီးခံျပည္သူ ေတ ြကို မတ၇ားစီ၇င္
ေနတာ ေတ ြ
အ ေ၇း ေတာ္ပုံ
ဒီ မ တ ၇ား ေ၇း
ဌာနက လူေတ ြ
Khin Mya Oo says:
2021-06-02 at 11:45 AM
ကျွန်မတို့ကတော့ ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ပြည်သူတွေနဲ့အမြဲထိတွေ့စေချင်တယ် ပြည်သူတွေအားရှိအောင်လို့ ကိုမင်းကိုနိုင် ကျန်းမာပါစေရှင့်
2021-06-02 at 12:18 PM
ရင္ဖြင့္ နားစြင့္ ပန္းတိုင္ ဆီ အတူတူ ရြတ္လႊင့္ သြားၾကမယ္
Thinzar Linn says:
2021-06-02 at 12:56 PM
Zay Htut အဖမ်းမခံရဘူးတွေ့လား…သူရှိသေးတယ်…
Online learning ကောင်းပေမဲ့ အင်တာနက်မရတဲ့နေရာ
မီးပျက်တဲ့အခါ sim internet. သုံးတဲ့အခါ bill.အတွက် စိတ်ပူရ
Sao Apinya says:
Hn Lay အေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္။
Aye PE says:
2021-06-02 at 11:25 PM
အမေရိကန်မှာ ဘာလူမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် အမေရိကန်နိုင်ငဲသားခံယူရပြီးတဲ့ကလေးတွေကို I am American လို့ပြောတဲ့အစီအစဥ်တစ်ခုကြည့်ခဲ့ရဘူးပါတယ်။၊ကိုယ်တို့ကလေးငယ်တွေကိုလည်းအဲဒီလိုပြောတဲ့အစီအစဥ်လေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်။၊ ဒါပေမဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုအပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဆွေးနွေးပြီးမှလုပ်ပါ။၊”ငါဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပါ။၊”
Khin Myo Khant says:
နိုင်ငံ ကို ပြန်ပေးဆွဲတာ ပါ .. နိုင်ငံ ကို အညွှတ် ချိုးတာပါ .. နိုင်ငံ ကို မွဲသထက် မွဲအောင် ပြည်သူတွေ လူညွှတ်တုန်း အောင်လုပ်တာပါ
Emily Mya says:
2021-06-03 at 6:59 AM
စနေနေ့တိုင်း စောင့်မျှော် နေမယ်နော် 🥰🥰
Mrmaung Hmine says:
ဘဲကြီးရော..ဘဲလေးရော ချစ်တယ်ကွာ(အစ်ကို့ကိုမရိုသေလို့ ဘဲကြီးလို့ခေါ်လိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ချစ်လွန်းလို့ခေါ်လိုက်တာပါ)
Moe Liu says:
2021-06-05 at 7:28 PM